कृष्ण सेन ईच्छुकको पदचाप र ‘ईण्डियन मिडिया’को सुचना भम्र – Sthaniya Patra
सूचना बिभ्रमका बिरुद्ध मोर्चा
कोरोना कहर छ । संसारभरि नै रहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणले पुजींवादी मुलुकहरुको ‘तुजुक’लाई नागेंझार पारेको छ । विश्व राजनीतिको समिकरणलाई समेत उथलपुथल पार्ने अवस्थामा रहेको कोरोना बाट हामी अछुतो रहन सक्ने कुरै पनि भएन । कोरोना भाइरसका कारण हामी स्वदेशमा भएका र बिदेशिएकाहरु समेत महामारीका बीच आफू बचौ र अरुलाई बचाऔं अभियानमा छौ ।
यद्धपि यसबेला हामी कोरोनासंग मात्र लडिरहन पाएका छैनौ । हामी कोभिड १९ संग मात्र भिडिरहेका छैनौ । हामी जनजिविका र जनतन्त्रका सवालमा मात्र उठिराखेका छैनौ । हाम्रा दैनिकीसंग मात्र हामी पौठेजोरी खेलिरहेका छैनौ । यसबेला हामी पडोसी मुलुक ईण्डियाले सदा झै बिपतिका बेला थप्ने कहरका बीच छौ । त्यो पीडासंग संर्घषरत छौ । उसले हाम्रो लिम्पियाँधुरा, लिपुलेक र कालापानी माथि चिथोरेको वर्तमान अवस्थामा कोरोना त्रास हाम्रा लागि ओझेलमा परेको छ । यतिबेला हाम्रो प्राथमिकता राष्ट्रियता भएको छ । मातृभुमि नेपालको उत्तर पश्चिम सिमानामा उसले पारेको घाउको खिल उखाल्न नसक्दाँ यति बेला हाम्रा जनजिविका प्रभावित भएको छ । दुई महिना बढीको लकडाउनले ध्वस्त पार्न नसकेको हाम्रो जनजिविका विस्तारवादी रवैयाले प्रभावित बनाएको छ । हो, सुगौली सन्धीको घाउमा तथाकथित छिमेकी राष्ट्रले पारेको इन्फेक्सनले हाम्रो भोक निद्रा हराएको छ । के खाउ के लाउ ? भन्ने सर्वहारा श्रमिकवर्गमा समेत आक्रोस थपिएको छ । आम नेपालीमा राष्ट्रिय भाव जागृत भएको छ ।
यही सन्र्दभमा सरकारले लिम्पियाँधुरा सम्मको नक्सा जारी गरेर बिगतका हाम्रा शासकहरुबाट भएका गल्तीहरु सच्चाउने प्रयास ग¥यो । जनताको संर्घषद्धारा अब हामीले लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीसहितको चुच्चे नक्सा पाएका छौ ।
त्यही चुच्चे नक्साका लागि २ बर्ष अघि यो पंक्तिकार पनि ईण्डियन पीएम नरेन्द्र मोदीको नेपाली भम्रण र कालापानीबाट ईण्डियन सेना फिर्ताको माग गर्दा बुटवलमा पक्राउ परेको थियो । त्यसैले जुन लामो संयुक्त संर्घषबाट हामीले ढिलै भएपनि जनताको बलमा यो नक्सा जारी गरिएको हो भन्ने बुझनुपर्दछ ।
उता ईण्डियन संस्थापन भने संसारभर नेपाली सार्वभौमसत्ताको बिरुद्धमा उभिएका छन । नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको अपमान गरेको हास्यस्पद मिडियाबाजी ईण्डियाले गरिरहेको छ ।
अझ त्यति मात्र नभई ईण्डियन सत्ता संस्थापनपक्षका मिडिया र तिनका चाटुकारद्धारा भारतीय जनता र विश्वजगतलाई गुमराहमा पार्दै तथ्यहीन कुरा फलाकिरहेका छन् । गोयबल्स शैलीमा प्रचारित नेपाली राष्ट्रियता बिरोधी ईण्डियन मिडियाले जनतामा भम्र सिर्जना मात्र नभई अर्काे छिमेकी मुलुकसंग जोडर बिषयान्तर गर्नुका साथै सार्वभौमिकताको अपमान गरेका छन ।
हिजो भुकम्प बेला नेपाली जनतालाई गरेको अपमान आजको कोरोना कहरमा समेत गोदी मिडिया दोहो¥याइरहेका छन् । यही सन्र्दभमा हामी नेपालका क्रान्तिकारी एंव जनपक्षीय पत्रकारहरु नेपाली पत्रकारका शहीद कृष्ण सेन ईच्छुकको स्मृति तथा साँस्कृतिक बलिदान दिवसमा छौ । बहुआयामिक ब्यक्तित्व कृष्ण सेन इच्छुक जो लेखक, पत्रकार, मानवअधिकारवादी र मुक्तियोद्धा समेत हुनुहुथ्यो । ४६ बर्षको उमेरमा सेनलाई २०५९ जेष्ठ १३ गते हत्या गरिएको थियो । उहाँले छोडेर गएको जनपक्षीय पत्रकारिताको पदचाप पछ्याउनेक्रममा हामी संर्घषरत छौ ।
श्रमिक र मालिकको पक्षमा भएका वर्गीय लडाईमा श्रमको सम्मान स्वरुप श्रमिकको पक्षमा उभिनु , सर्वहारा वर्ग र पुजिपति वर्गका बीचको संर्घषमा सर्वहारा वर्गको पक्षधरता लिनु , स्वाधीन अर्थतन्त्रको लागि राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभियन्ता बन्नु ,सार्वभौमिकता सानो वा ठूलो हुदैन भन्ने कुरा स्थापित गर्न संर्घषमा उभिएका राष्ट्र र जनताको पक्षमा वकालत गर्नु , अन्याय अत्याचार बिकृति बिसंगतिका बिरुद्ध लाग्नु नै जनपक्षीय पत्रकारिकताको आजका कार्यसुची हुन पुगेको छ ।
ठिक यसैबेला इण्डियन ‘गोदी मिडिया’द्धारा सिर्जित सार्वभौमसत्ताको बिरुद्ध फैलाइएका भम्रलाई चिर्नु आजको नेपाली समुदायको आवश्यकता भएको छ । सुचना भुमण्डलीकरणले संसारलाई एक गाऊ जस्तै बनाएको यो शदीमा सुचना भम्रहरुलाई चिर्नका लागि जनपक्षीय तथा राष्ट्रियताका पक्षधर लेखक पत्रकार तथा मिडियाले भुमिका खेल्नुपर्ने वर्तमान अवस्थामा हामी उभिएका छौ । यही अर्थमा समेत ईच्छुकले हामीलाई देखाएको बाटो पछ्याउनु हाम्रा लागि उतिकै महत्वपूर्ण छ । नेपालको राष्ट्रियतामा ईण्डियन संस्कृति उतिकै जिम्मेवार छ । जुन आज आएर ईण्डियन टेलिभिजन च्यानलहरुले देखाएको गैरपेशागत हर्कतले पुष्टि नै गरिदिएको छ । त्यो संस्कृति भारतीय मेहनतकश जनताको संस्कृति नभई बल्की ब्रिटिश उपनिबेशकालीन संस्कृतिसंगै मिहिन ढंगबाट मिश्रित वा अन्तरघुलन भएर आएको हैकमवादी संस्कृति पनि हो । हिजो बिट्रिस साम्राज्यवादले आफू माथि गरेको थिचोमिचो र अमानवीय हर्कत बिर्साउने खालका मिचाहा संस्कृति ईण्डियन संस्थापन समुहले नेपाली सार्वभौमसत्तालाई देखाउने गरेको छ । यही कडीका रुपमा नेपालको ७१ स्थानका भुमि अतिक्रमण तथा ईण्डियन मिडियाको कर्तुतलाई लिइनु उचित हुनेछ । त्यही संस्कृतिकै जगम दिनानुदिन प्रहार हामीले बेर्हाेर्दै आएका छौ ।
ब्रिटिस साम्राज्यवादले हिन्दुस्तानीहरुलाई इण्डियन संस्कृति लादेर गयो । त्यही संस्कृतिबाट र्सिजित दृष्टिकोणका कारण आजको सत्ता संस्थापनले समेत नेपाललाई उही पुरानै चश्माले हेर्ने र त्यही अनुरुप आफ्ना मिडियालाई गाईड गर्ने भएका कारण आजका ईण्डियन मिडियाले तथ्यहीन तर्क पसारिरहेका छन् । त्यो नेपाल माथि मात्र नभई पाकिस्तान , श्रीलंका ,माल्दिभ्स, बंगलादेश र भुटान लगायतका छिमेकी मुलुक र आन्तरिक रुपमा काश्मिर र सिक्किम एंव हिन्दु मुसलवान हल्ला गर्ने उसको रवैया छ ।
यस अवस्थामा नेपाली राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई सही दिशा दिनका सबैभन्दा पहिला आन्तरिक एकतामा जोड दिइनुपर्दछ । जो नेपालमा सरकारले नक्सा जारी गरेपछि देखिएको पछि छ यसलाई अझ समृद्ध बनाउन बृहतर एकताको खाका बनाइ दलहरुबीच सर्वपक्षीय सम्मेलन हुुनुपर्दछ ।
साथै पत्रकारहरुका तर्फबाट समेत एकताबद्धता र यसबारे गाईडलाइन बनाउनु आजको अपरिहार्यता भएको छ । त्यसका लागि भारतीय जनता सहित संसारभर ईण्डियाले मिचेको नेपाली भुमिबारे अन्तराष्ट्रियकरण गरिनुपर्दछ । अब भारतीय जनतालाई ईण्डियन सत्ता संस्थापन र उसद्धारा पालित पोषित मिडियाले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता बिरुद्ध गरेका बिषबमनका बारे स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दछ । साथै नेपालका जनपक्षीय मिडियाकर्मीबीच बृहत मोर्चाबन्दी र भारतीय संस्थापन बिरुद्धका मिडियाकर्मी संगको मोर्चाबन्दी गरेर अब ईण्डियन सत्ता संस्थापन र त्यहाँको नोकरशाही तन्त्रका हर्कतको पर्दाफास गरिनुपर्दछ ।त्यति मात्र नभई संसारभर भएका थिचोमिचोका साथै राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका पक्षधर पत्रकार लेखक तथा संचारमाध्यमका बीच मिल्ने मुद्धाहरुमा ऐक्यबद्धताको विश्वब्यापी संस्कृति निर्माण गर्दै सूचना बिभ्रमका बिरुद्ध मोर्चा कस्न पहल लिनुपर्ने देखिन्छ । जसबाट विश्व साम्राज्यवादी बिरुद्धको सुचना भम्र तोड्न सहज हुनेछ । इतिहासले सुम्पेको नेपाली राष्ट्रियताको आन्दोलनको यो गहन जिम्मेवारी बहन गर्न हामी तत्पर रहौं ।
र अन्त्यमा ईच्छुकका प्रतिबन्ध कविताको अन्तिम हरफ उहाँलाई नै श्रद्धाञ्जली स्वरुप…………..
ओ, अत्याचारका पहरेदारहरू ! अन्तिम जित हाम्रै हो
अन्तिम युद्ध लडिरहन्छौँ …………….
मिति २०७७ जेठ १२ गते १२ बजे ……….
लेखक क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघका कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनद्वारा ४१ औ स्थापना…
जनसभामा लाई सफल बनाउन जनपरिचालन गर्ने